China Ihu nkpuchi KN95 isi-n'ịnyịnya factory na-emepụta | Gubang
Ihu nkpuchi KN95 isi-n'ịnyịnya
GB2626-2006, GB2626-2019 KN95 A NA-EBU ISI
1. Wepụ ihe na-agbanwe n’elu isi ya, n’elu isi ya.
2. Tinye nkpuchi na ihu, mee ka imi mechie imi,
Ihe nkpuchi ahụ na-ekpuchi agba.
3. Elastic n'okpuru isi n'olu dị n'okpuru ntị.
4.Eji aka abuo dozie udi nke nkpuru imi, huu na a kara akara.
5.E were aka kpuchie nkpuchi wee kuo ume; nwee mmetụta ikuku si n'imi,
ikesiike na imi clip. Ọ bụrụ na ikuku ikuku si n'ọnụ ya, biko gbanwee agbanwe.
Ọzọ, huu akara ahụ.
Nzacha ọ dịkarịa ala 95% nke ihe ikuku.
Uwe eji edozi isi
Ultrasonic ịgbado ọkụ technology, mama-free na odorless
Nchekwa na Nlekọta
1. Saa aka gị tupu i tinye ihe nkpuchi, ma ọ bụ zere imetụ akụkụ nke nkpuchi ahụ mgbe ị na-ekpuchi ihe mkpuchi iji belata ohere nke mmetọ nke nkpuchi ahụ.
Na-amata ọdịiche dị n'ime na n'èzí, na elu nke nkpuchi ahụ.
Ejila aka gị pịachaa ihe nkpuchi ahụ. Ihe nkpuchi N95 nwere ike ikewaputa oria a n’elu nkpuchi. Ọ bụrụ na ị jiri aka gị pịkọta ihe nkpuchi ahụ, nje ahụ ga-abanye na nkpuchi ahụ na ụmụ irighiri mmiri, nke ga-ebute nje virus n'ụzọ dị mfe.
3. Gbalịa mee ka ihe nkpuchi ahụ dabara nke ọma na ihu. Testzọ nnwale dị mfe bụ: Mgbe i tinyechara ihe nkpuchi ahụ, kpochapu ike ka ikuku wee ghara ịpụ site na nsọtụ nkpuchi ahụ.
4. Ihe nkpuchi nchebe ga-enwe mmekọrịta chiri anya na ihu onye ọrụ. Onye ji ya ga-akpụ afụ ọnụ ya iji hụ na ihe nkpuchi ahụ dabara nke ọma na ihu. Ajị agba na ihe ọ bụla etinyere n’etiti ihe nkpuchi na ihu ga-eme ka mkpuchi ahụ daa.
5. Mgbe ịmechara ọnọdụ nke nkpuchi dịka ọdịdị ihu gị, jiri mkpịsị aka aka abụọ pịa mkpịsị imi n'akụkụ ọnụ elu nke nkpuchi ahụ iji mee ka ọ dị nso na ihu.
Ihe nzacha ruru 95% nke ahụ, na-enye nchebe dị oke mkpa megide ahụ ikuku, mmetọ na uzuzu.
Ngwunye eriri dị elu nke na-eme ka ihe dị mma.
Mfe n'ogige atụrụ ma na-ebu gị.
Mere site na ntụsara ahụ, ihe omume ihu na ihu.
KN95 bụ nkpuchi nchebe dị elu nke nwere ike nzacha ruo 95% nke ihe na-enweghị mmanụ na ikuku. Nke a gụnyere ájá na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ikuku na-ebute.
Ezubere ihe nkpuchi ahụ iji kpuchido gị pụọ na ihe ndị nwere ike ịmerụ ikuku wee hụ na ị na-eku ume ikuku oxygen. Bia 10 iberibe na mkpọ.
KN95 na-ewepu opekempe nke 95% nke ahụ ndị dabara na oke nke 0,3 microns na karịa. Ndi emeputara ihe nkpuchi N95 edeputala site na ulo akuko ozi ha na nkpuchi KN95 bu ezigbo uzo ozo. Ọ na - eme akara mgbe ọ na - ekpuchi imi na ọnụ ọfụma iji belata ihe egwu ibute ọrịa.
Nke gara aga: Factory N'ogbe Oem Ffp2 Ffp3 Mask - Ihu nkpuchi KS-9005 - Gubang
Osote: Ihu nkpuchi KN95 na valvụ
Ihu Nkpuchi Factory Kn95
Ihu Nkpuchi Kn95 Supplier
Ihu Nkpuchi Kn95 Ndị na-eweta ya
Kn95 Nkpuchi Ihu Nkpuchi
P2 Kn95 Ihu nkpuchi
Ihu nkpuchi KN95 na valvụ
Nkpuchi ihu KN95